KDE 4.10 waxay yeelan doontaa taageero lagu daro badhannada badhanka cinwaanka cinwaanka | Laga soo bilaabo Linux
KDE 4.10 waxay yeelan doontaa taageero lagu daro badhamada badhanka cinwaanka cinwaanka
Sida laga soo xigtay Martin Gräßlin soosaaraha ugu weyn ee KWin, yaa dhajiyay isbadalada qaar ee soo galaya - KDE 4.10, Noocani wuxuu yeelan doonaa suurtagalnimada in lagu daro menusyada toolbar barta cinwaanka.
Haa, waxaan ula jeedaa Faylka, Tafatirka, Aragtida, Qalabka, Caawinta, iwm menus, kaas oo lagu ridi karo baarka ay ku yaalliin badhanka yareyso / weyneeyo / xirto, si loo badbaadiyo boos ka sii fog, mana sameeyo waan ogahay sida aad laakiin waan jeclahay fikradda. Nasiib darrose ma hayno shaashad shaashadeed oo ina tusaysa sida shaqadan cusub u ekaan doonto, laakiin waxay noqon lahayd wax sidan oo kale ah (sawir aniga igu dhejisan):
Shaki la'aan, KDE 4.10 wuxuu noqon doonaa nooca ugufiican deegaankan Desktop-ka waxaana rajeynayaa inuu yahay wax wanaagsan.
Mahadsanid faallo ay sameeyeen Christian, waxaan arki karnaa doorashadan markii la shaqeynayo:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » KDE 4.10 waxay yeelan doontaa taageero lagu daro badhamada badhanka cinwaanka cinwaanka
Xaqiiqdii uma eka sida sawirkaaga, laakiin sidan waa sidan: https://www.youtube.com/watch?v=j0o1sRLRc60&hd=1. Taasi waa, waxaa jira afar ikhtiyaar: menu caadi ah, menu toosan (laakiin hadda badhanka ayaa ka yar, isla cabirka sida loo kordhiyo oo loo yareeyo badhanka), menu ku jira guddi pop-up ah oo ku yaal shaashadda dusheeda, iyo dhoofinta menu in loo adeegsado guddi loo qoondeeyay ama guddiga loo yaqaan 'Unity panel').
Waxaan isticmaalayaa KDE 4.10 RC2 oo ku yaal Kubuntu 12.10 oo waxaan u bartay hal menu badhanka :-).
: O Waad ku mahadsan tahay macluumaadka .. Waxaan sameeyay sawirka anigoo u maleynaya sida uu u ekaan doono .. 😉
Edito: Oo sifiican baan u daawaday fiidiyaha, waan jeclahay sida ay umuuqato
Waan ka xumahay in goobta LFFL ay u adeegsato shaashaddaada wax laga beddelay mid ka mid ah qoraalladooda (http://www.lffl.org/2013/01/kde-410-massimizza-lo-spazio.html) adiga oo aan ku siin deynta u dhiganta.
Waxaa jira dhowr jeer oo boggan uu igu sameeyo aniga oo kale qoraalladayda, laakiin ma aanan dooneynin inaan xaqiijiyo, weli shaki ayaa i haystay ... laakiin hadda, kiiskan, waan xaqiijinayaa. Sidee anshax xumo u tahay qeybta LFFL.
Dadku waxay codsanayaan weerarka DDoS !!! : D: D: D
mmmm si fiican, looma arko inay keydineyso meel kasta oo ku saabsan nooca hadda jira. Waxay umuuqataa kun jeer oo kafiican, dhadhankeygana waxqabadkeyga badanyahay, nooca hagaajinaya waxkaqabashada muuqaalkiisa oo laguwaafajiyay gimp, waa wax laga xishoodo in kani uusan aheyn naqshad UU go'aansatay inay hirgaliso.
Maxaad u leedahay inaysan meel dhigin?
Xaqiiqdii, sababta ay u go'aansadeen inaysan dhigin liistada oo dhan baarka cinwaanka (sida aan u xasuusto dood ku saabsan liisaska dirista) waxay ahayd inaysan hubin karin in had iyo jeer ay jirto meel ku filan oo lagu soo bandhigo liiska oo dhan. Maxaa la sameeyaa marka dalabka aan la badinin, ama marka ay jiraan menusyo badan?
Haysashada liiska oo dhan hal badhan oo ku yaal dhinaca bidix waxay umuuqataa xalka xarrago leh ee wax ku oolka ah. Laakiin sida ay yiraahdaan, u dhadhamiya midabada :-).
Kaliya waxaan rajeynayaa in la dhaqaajin karo, maxaa yeelay waxaan isticmaalaa badhamada bidix.
Waa la dhaqaajin karaa dhibaato la'aan. Waxaan sameeyay imtixaanka: https://dl.dropbox.com/u/54722/kwin-kde410rc2.png
Sida ka muuqata fiidiyowga, cabbirka dusha sare ee hoonbarigu wuxuu la mid yahay badhanka ku xiga badhanka kala-baxa, aragtida, iwm. taas oo u eg inay ku jirto nooca hadda jira. Taasi waa sababta aan u iri. Sida booska loogu talagalay liiska buuxa, waxaan u maleynayaa inay dhici lahayd, ama ay dhici lahayd, si la mid ah sida ku dhacda nooca hadda jira ee kde, taasi waa, haddii cabirka arjiga uusan ku filneyn in lagu muujiyo menus markaa kaliya waa inay tus kuwa la arki karo iyo xulashooyinka kale ellipsis iyo taariikh waa in la muujiyaa si loogu dhaqaaqo iyaga. Sidoo kale waxaan u maleynayaa in booskaas la xallin lahaa haddii ay jiraan labada ikhtiyaar, badhanka keliya iyo liiska buuxa sida nooca hadda ee kde. In kasta oo dabcan, waan la socdaa inayna sahlaneyn haba yaraatee, laakiin aakhirka waa uun ra'yi.
Hagaag, hada waan fahmay faalladaada :-). Nooca hadda jira ee loo yaqaan 'Dolphin' (KDE 4.9), liiska ayaa horeyba loo qariyey (ama halkii, waxay ku xaddidan tahay badhanka batoonka), markaa si cad isbeddelka ka muuqda fiidiyowga ma keenayo keyd ballaaran.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, maskaxda ku hay in fiidiyowgaan uu ka yimid qaab duug ah oo hadda gaboobay; hadda (KDE 4.10 RC2) cabbirka badhanka menu-ka wuxuu u dhigmaa cabbirka badhamada, yaree, weynee oo xir. Waxaad ku hubin kartaa sawirkan aan hadda soo galiyay: https://dl.dropbox.com/u/54722/kwin-kde410rc2.png
Jidka Masiixiyiinta, waxaan gartay in badhanku aanu lahayn waxqabad labalaab ah (badhan ahaan ama liis buuxa) fiidiyaha, maxaa yeelay ma aanan arkin ikhtiyaarkaas, laakiin sida muuqata waxaad marin u leedahay noocaas cusub. Waan ku qanacsanahay hadaad shakiga iga saarto.
Ma aqaano haddii aan si sax ah u fahmay su'aashaada. KDE 4.10 RC2 waxaa jira afar ikhtiyaar: 1) liiska caadiga ah ee daaqada arjiga (ama badhanka toolbar ee barnaamijyada qaar, sida Dolphin ama Choqok), 2) badhanka cinwaanka cinwaanka, 3) menu kujira pop-up guddiga sare ee shaashadda, 4) liiska wax dhoofinta (oo loo adeegsado guddi gaar ah ama midnimo), oo la mid ah OSX.
Mise waxaad u jeeddaa haddii badhanka uu leeyahay waxqabadka menu macnaha guud ee Kwin? Sababtoo ah liiskan waxaa hadda lagu heli karaa adigoo gujinaya midig cinwaanka cinwaanka.
Muuqaal aad u fiican oo noocan ah KDE uu keeni doono
Wheezy ayaa hadda u soo baxay inuu arko haddii imtixaanka soo socdaa uu waxaas oo dhan qaadanayo.
Muddo dheer ayaan KDE-kayga u qaabeeyey sidan: http://gusta-who.x10.mx/screen.png
Muuqaalkan cusub aniga ayuu igu fiicnaan doonaa 😀
Fuck sidee taas u samaynaysaa?
wuxuu la socon karaa plasma-widget-menubar
Daaqadkuna waxay u maleyneysaa inay tahay Wilaa kale Window Control Plasmoid
xbar ama menubar iyo tan: http://kde-apps.org/content/show.php?content=143971 in kasta oo qabashadu ay isaga uga sii fiicnaan lahayd astaamaha oo aan loo oggolaan inuu isticmaalo "mawduuca plasma" xD
Kadib rakibida xiriirka waa inaad wax ka bedesho feylka soo socda:
hoosna ku dar
BorderlessMaximizedWindows = run
Waa maxay talo fiican 😛
Markii aan arkay sawirka aad tifaftirtay, waxaan xasuustay ciyaaryahanka MediaMonkey, oo aan maalmo ka hor ku rakibay Win7.
KDE 4.10 waxay noqon doontaa sii deyn weyn 😀
Weyn Laakiin waxaan shaki yar ka qabaa: isku si miyaa loo samayn karaa wax kastoo daaqaddu qurxiso? Mise waa muuqaal gaar ah oo ah mawduuca qurxinta Oxygen?
Shakigani wuu i weerarayaa maxaa yeelay waxaan xasuustay inay jirto wado "looga tagto" baarka cinwaanka ee Firefox, qaabka Chrome / Chromium, laakiin waxaa kaliya lagu samayn karaa qurxinta daaqada Oxygen.
Sida aan ka fahmay, fikraddu waxay tahay in dhammaan qurxinta lagu daro KDE SC la taageeray, laakiin ugu yaraan nooca RC2 wuxuu kaliya ku shaqeeyaa Oxygen.
Waxay ahayd wixii aan ka baqay ...
Waxay umuuqataa mid wanaagsan wax badana waa looga hayaa noocaan cusub ee KDE iskuna day shaqadan marka hore inaad aragto haddii aan jeclahay iyo in kale.
Ku soo biir oo kobci barnaamijyadaada Firefox OS